Nezvedu - Taicang Power-Packer Mechanical Science uye Technology Co, Ltd.
Kwemakore makumi mashanu, Power-Packer yakagadzira tambo yakasimba uye ine hunyanzvi yeiyo hydraulic chinzvimbo uye inofamba michina yekudzora ayo ave muyero wegoridhe mukugona kwekutsikisira, latching, kuenzanisa, kusimudza uye kudzikamisa masisitimu anoshandiswa mune mimwe misika yanhasi inoda zvikuru.
Isu tinoshumira vatengi pasirese, kusanganisira maOEMs uye Tier 1s mune dzakasiyana magumo-misika. Kuti tigone kuzadzisa zvido zvemusika zvakasiyana, tine mahofisi makuru ari muNetherlands neUnited States, pamwe chete nemiti yekugadzira muNetherlands, US, Turkey, France, Mexico, Brazil, China neIndia.
Power-Packer China, (Taicang Power-Packer Mechanical Science uye Technology Co, Ltd.) chikamu cheCentroMotion sangano, rinova iro rinotungamira mupi weiyo hydraulic chinzvimbo uye inofamba kutonga mhinduro. Fekitori muChina inofukidza nharaunda inopfuura mazana manomwe emamirimita emamirimita, iri muSuzhou, Taicang. Isu tinogadzira mhinduro dzakagadzirwa-senzira yekushandisa nhare, senge yekurapa uye yekutengesa mota aftermarket mhinduro, ramba uchishandira zvakanyanya musika weChinese nevatengi veAsia-Pacific.
Zvisinei nesarudzo yako, dhizaini dhizaini kana nzvimbo dzenzvimbo, mainjiniya ePower-Packer anokwanisa kushanda newe kukudziridza yakafanira tsika magadzirirwo emagetsi kukubatsira iwe nevashandi vako kushanda zvine hungwaru uye zvakachengeteka.
Power-Packer, bazi reApplied Power rinova rakaparadzana kambani, rinotungamirwa neNetherlands.
Kutanga kuvandudzwa kweCab Tilt Systems muRaki Indasitiri.
Nhanganyaya ye Low-Pressure Electro-Hydraulic Actuation yeConvertible Roof Tops uye Manual-Hydraulic actuators eiyo Medical Indasitiri.
Kutanga kweRegenerative Hydraulic Lost Motion (RHLM) yeCab Tilt Systems.
Fekitori inowanikwa muTurkey.
Power-Packer inova chikamu cheActuant Boka United States dzimbahwe rinovhura nzvimbo yeBrazil inovhura.
Nhanganyaya yeC-Hydraulic yakarasika kufamba (CHLM) yeCab Tilt Systems.
Yvel inowanikwa, ichipedzisa Cab Tilt System chigadzirwa chinopa, China nzvimbo inovhura.
Kambani inopemberera # 1 yepasi rose musika chinzvimbo chemotokari Convertible Top Systems, Cab-Tilt masisitimu eanorema-basa cab-pamusoro-injini marori, uye RV actuation system.
India nzvimbo inovhura.
Nzvimbo nyowani inovhura muTurkey.
Power-Packer inova chikamu cheCentroMotion.